बैंकहरुको सीडी रेसियो ९०% मुनि झर्यो, कस्तो छ निक्षेप र कर्जाको अवस्था ?
काठमाण्डौ। बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमुनि झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ २२ गते बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ९० प्रतिशत झरेको छ। यो दिन औसत सीडी रेसियो ८९.९६ कायम भएको छ। जेठ २३ मा पनि औसत सीडी रेसियो ९० प्रतिशत मुनि नै रहे पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा थोरै बढेर ८९.९९ कायम भएको छ। जेठ २३ मा बैंकहरुको कुल...
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र २०८३ ‘छ’ जारी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले जेठ २५ गते ४ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्र भोलि जेठ २४ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरिनेछ। यो ऋणपत्रमा इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित...
राष्ट्र बैंकले २१.०९ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने, आउँदो सोमबार बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ २३ गते (सोमबार) २१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले जेठ २४ गते जारी गर्न लागेको ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल सोमबार (जेठ २३ गते) गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले ९१ दिनका लागि ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो...
यति चाँडै डिजिटल भुक्तानीको विकास हुन्छ जस्तो लागेको थिएन : गभर्नर
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटाइजेसनको विकास उत्साहजनक देखिएकोे बताएका छन्। ब्रान्डवर्थ प्रालिले शुक्रबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोरोनाकालपछि नेपालले डिजिटल पेमेन्टमा फड्को मारेको बताए।...
रु. ५० करोडको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक, १२.५% ब्याज पाइने
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र–२०८४’ भोलि जेठ १८ गते (बुधबार)देखि बिक्री खुला गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीका लागि यो बचतपत्रको बिक्री खुला गर्न लागेको हो। यो बचतपत्र मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न वा �...
राष्ट्र बैंकले थप्यो भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा यस्ता व्यवस्था, के–के थपिए ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ मा थप व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०७८ को अ.प्रा.निर्देशन नं. १४÷०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था) मा थप व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र केही व्यवस्था थप गर्दै भुक्तानीसम्बन्धी...
रु. २३.१३ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, सोमबार बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि जेठ १६ गते (सोमबार) २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले जेठ १७ गते जारी गर्न लागेको २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भोलि सोमबार गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल जारी गर्दैछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका नवनियुक्त सदस्यद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. शंकरप्रसाद आचार्यले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कायमकुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सिवाकोटी र आचार्यलाई शथप ग्रहण गराएका हुन्। नेपाल...
फलफूल एवं जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन परियोजनालाई दिने कर्जामा राष्ट्रबैंकले थप्यो यस्तो व्यवस्था
काठमाण्डौ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फलफूल एवं जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन परियोजनामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम थप गरी आवधिक कर्जा गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. २ को बुँदा ३८ मा यो व्यवस्था थप...
आजबाट रु. ३ अर्ब बढीको ‘नागरिक बचतपत्र’मा आवेदन खुला, ११% ब्याज पाइने
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जेठ १२ गतेबाट नागरिक बचतपत्र–२०८४ बिक्री खुला गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले रु. ३ अर्ब ३ करोड ६ लाख ६० हजार रुपैयाँको नागरिक बचतपत्र बिक्री खुला गरेको हो। यो बचतपत्र इच्छुक नेपाली नागरिकले मात्र खरिद गर्न पाउनेछन्। यो बचतपत्रमा लगानीकर्ताहरुले वार्षिक ११ प्रतिशत ब्याज (ब्याज कर...